Stella Rambisai Chiweshe music, videos, stats, and photos | Last.fm
8 July 1946 (age 74)
Stella Rambisai Chiweshe is one of the few women playing the male-dominated mbira-based music of the Shona people. Born in the late 1940s, Chiweshe grew up in Zimbabwe's forest region of Mhondoro, about 45 miles from the capital city, Harare. Chiwese began learning to play the mbira dza vadzimu in 1964. It was very unusual for a girl to play mbira at that time and Chiweshe had to face the dissaproval of her community, where woman performers were often treated as "loose women." Chiweshe perservered to become perhaps the best known player of the instrument outside Zimba… read more
Stella Rambisai Chiweshe is one of the few women playing the male-dominated mbira-based music of the Shona people. Born in the late 1940s, Chiweshe grew up in Zimbabwe's forest region of Mhondoro, about 45 miles from the capital city, Harare. Chiwese began learning to play the mbira dza … read more
Stella Rambisai Chiweshe is one of the few women playing the male-dominated mbira-based music of the Shona people. Born in the late 1940s, Chiweshe grew up in Zimbabwe's forest region of Mhondoro, about 45 miles from the capital city, Harare. Chiwese began learning to play the mbira dza vadzimu in 1964. It was very unusual for a girl to play mbira at that ti… read more